Home Wararka Mahdi Yatakabaruu oo Caay ugula Dhaqaaqay Kooxdii Soo Tababartay ee Shaqada Soo...
Mahdi Yatakabaruu oo Caay ugula Dhaqaaqay Kooxdii Soo Tababartay ee Shaqada Soo Siisay TPLF.
R/W K/Xigeenka Dowladda Xilgaarsiinta waa ruux ay soo koriyeen, soo tababareen, soona dirsadeen TPLF, laakiin hadda bilaabaya inuu caayo gacantii soo quudisay ee u soo xilsaartay inuu Somaliya ka shaqeeyo.
Mahadi Maxamed Guuleed oo ay hadda Somalida u taqaanno “Yatakabaruu” waxaa soo waxbaray oo soo gardaadiyey TPLF, waxaanu ka mid ahaa dhallinyardii jawasiis ahaan loo soo tababary si dadka Somalida loogu isticmaalo waana caado caam ah oo lagu yaqanno waddamada xaqdarrada ku nool ee haysta dhulalka.Tusaale imisa qof oo reer Falastiin ah ayaa u shaqeeya Yuhuudda oo dhibkaas joogtada ku haysa dadkooda u soo tababaratay oo uga dhex shaqeeya. Itoobiyana waa la maid oo waa halkaas Meesha laga soo dajiyo khidadaha ay ku hawlgeliso jawaasiisteeda.
Mahdi Yatakabaruu waxaa uu ku dhashay Aware oo ay Somalida Itoobiya ka haysato, waxaanu wax ku bartay Itoobiya, waxaa muddo kadib loo wareejiyey Somaliland oo ka mid noqday ubucda Somaliland oo uu ka gaaray heerkii loo baahnaa, kadibna waxaana loo soo wareejiyey Somaliya sida Dubbe oo kale.
Mahdi qof ahaan waa aftahan hadallada heli og, khaa’in is qarinta ku wanaagsan, isla markaana waa ruux ay ka suuragalaan wax kasta oo dalka iyo dadka Itoobiya ee uu daacadda u yahay uga bahan yihin Somaliya.
Markii maamulkii TPLF uu Meesha ka baxay, oo uu xilka qabtay Abiy Axmed waa la dallacsiiyey maadama labadoodaba ay Amxaarada ku shaqeynsan jirtay. Mahdi waxaa la keenay Xamar waxaana la hoos dhigay RW Kheyre si mar waliba ay Itoobiya u hesho xogta rasmiga ah ee dalka, iyadoo uu xafiiska Kheyre maamulayey Axmed Nuur oo isagana ah jaajuus kale oo Itoobiyaan ah, waxayna joogto xogaha isu weydaarsan jireen Fahad Yasiin oo isagana ay Qatar ka rabtay xogta waxa ka socda Somaliya.
Ayaan hore waa kii lahaa Yatakabaruu “ Waa in doorashada 20/21 lagu kala baxaa wareegga Kowaad oo uu Farmajo ku soo baxaa ” Waxaanu tiraac u soo qaatay Doorashoyinkii boobka ahaa ee G/Mudug, K/Galbeed oo 15 qof lagu dilay iyo tii u dambeysay ee H/Shabeelle oo xataa lacag lagu siiyey kii la yiri la tartan MW Guudlaawe oo xataa is illoobay sacabna la soo booday markii la yiri waxaa guuleystay Cali Guudlaawe.
Waxaasa maanta la yaab noqotay in uu TPLF caayo Mahdi Yatakabaruu, taas oo muujinesa inuu yahay abaal laawe aan waxaba lagu aamini kareyn. Muddo dhow waxaad maqli doontaa warar xiisa badan oo laga hayo Yatakabaruu, kuwaas oo uu yiri “ Aniga maahi qof ay sidey doonaan ka yeeli karaan Fahad iyo Farmajo oo waxaan dugsanahay halka ay dugsan yihiin”.
Mar kalana isagoo sheekeynayo ayuu yiri “ haddii waxa aan ka hayo aan sii daayo iyagaaba cararaya” taas oo uu ula jeeday Farmajo, Fahad iyo Kheyre, “ waayo” buu yiri “waxaa loo kala mudan yahay sidii shaqada (jaajuusnimada) loogu kala horreeyey”.
Ugu dambeyn Mahdi Guuleed “Yatakabaruu” waa wiil Amxaar ah oo Somaliya uga wakiil ah Sirdoonka Itoobiya oo ah hay’ad ka madaxdbannaan Wasaaradda Arrimha dibadda ee Itoobiya, wuxuu toos ula shaqeeyaa xafiiska RW/K/Xigeena Itoobiya Demeke Mekonnen Hassen oo ah nin Amxaar ah oo dalkaba uu isaga maamulo hadda.
Eedeynta iyo Caayda TPLF waa qiiq isku qaris ujeeddo gaaban leh oo loogu fasaxay Yatakabaruu inuu Somalida ku cameeyo sida ay caadiyan sameeyaan jawaasiista magaca qarsoon ku shaqeeya,waxaana Xafiiska R/W Ku xigeenka Itoobiya looga yaqaannaa Khadar Siwiri waxaan baaqa xafiiska RW Abiy marka soo xiganayo xogtiisa, ugu yeeran kaas oo la macna ah Khadarkii qarsoon. Halkaan hoose ka daawo isagoo Ła hadalayo dalkiisa iyo dadkiisa Itoobiya.